Kpọọ maka ntinye, Science Decolonise - AfricArXiv
bipụtara Johanssen Obanda on 3BA August 2021 3BA August 2021
Ndị otu nọ na AfricaArXiv ji nganga mara ọkwa na anyị na ya na -emekọ ihe Masakhane iji wuo otu nchọpụta asụsụ Afrịka yiri ibe ya site na ntụgharị nke ihe nchoputa nyocha e nyefere n'AfricaArXiv. N'ime edemede edepụtara, ndị otu nọ na Masakhane na AfricArXiv ga -ahọpụta ihe ruru 180 na mkpokọta maka ntụgharị.
Site na ọkwa onyinye:
'A bịa na nkwurịta okwu sayensị na agụmakwụkwọ, asụsụ dị mkpa. Ikike ka a na -atụle sayensị n'asụsụ ụmụ amaala obodo nwere ike ọ bụghị naanị nyere aka gbasaa ihe ọmụma nye ndị na -adịghị asụ Bekee ma ọ bụ French dị ka asụsụ mbụ, kamakwa ọ nwere ike jikọta eziokwu na ụzọ sayensị n'ime omenala ndị agọnarịla ya na gara aga. Ya mere, ndị otu a ga -ewupụta otu ụdị asụsụ nyocha dị n'Afrịka nke nwere ọtụtụ asụsụ, site n'ịsụgharị akwụkwọ nyocha nke mbido Afrịka ewepụtara na AfricArxiv n'asụsụ 6 dị iche iche n'Africa: isiZulu, Northern Sotho, Yoruba, Hausa, Luganda, Amharic. '
GỤKWUO na: www.masakhane.io/lacuna-fund/masakhane-mt-decolonise-science
Iji nyefee akwụkwọ edemede gị (mbughari, mbipụta akwụkwọ, ma ọ bụ isi akwụkwọ) biko dejupụta fọm ahụ na bit.ly/decol-sci
Ọ bụrụ na ị na -edo onwe gị n'okpuru, ntuziaka ndị a ga -enyere gị aka idobe AfricArXiv nke ọma na Zenodo:
Gị zenodo.org/communities/africarxiv/ wee debanye aha/banye na iji akaụntụ gị ORCID
Ọ bụrụ na ịnweghị ORCID biko gaa orcid.org/ iji nweta otu
Laghachi zenodo.org/communities/africarxiv/, pịa bọtịnụ bulite akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Tinye akwụkwọ ikikere CC BY 4.0 na edemede gị
Mezue usoro mbugo
Tinye njikọ na bulite gị na ụdị google iji mezue nrubeisi gị maka ọrụ ahụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka biko kpọtụrụ submit@africarxiv.org
A ga -enyocha ntinye gị maka ntụgharị asụsụ dabere n'ụkpụrụ ndị a:
Isiokwu nyocha nke mmasị n'ozuzu yana dabara maka ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ afọ 1
Nkesa ịdọ aka na ntị n'ofe corpus
Nkesa mpaghara site na onye edemede mbụ ebe yana mba
Ị nwere ike nyefee ọrụ gị n'asụsụ Bekee, French, Arabic, ma ọ bụ Portuguese.
A ga -ekenye ihe odide niile edobere n'ihu ọha n'asụsụ mbụ ya na DOI (njirimara ihe dijitalụ) yana n'okpuru ikikere CC BY 4.0. Anyị ga -agwa ndị dere akwụkwọ edemede ndị ahụ ahọpụtara maka ntụgharị asụsụ.
Kedu ihe bụ akara mbido?
Mbipụta mbụ bụ ihe odide sayensị nke ndị odere na -ebugo na sava ọha. Mbipụta mbụ nwere data na ụzọ mana akwụkwọ akụkọ anabatabeghị ya. GỤKWUO
Kedu uru ịkekọrịta ihe odide gị dị ka ihe mbido?
Debe ihe nchoputa nke mbu
Edemede a na -enweta DOI iji mee ka ọ mara mma
A ga -enye akụkọ ahụ ikikere n'okpuru Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) akwụkwọ ikike
Welie profaịlụ gị dị ka onye nyocha Afrịka na nke ụlọ ọrụ ndị ọbịa gị
Enwere m ike ibipụta akụkọ m n'akwụkwọ akụkọ mgbe m bipụtasịrị ya dị ka mbipụta mbụ?
Ee. Mgbe ị nyefere AfricaArXiv nbipute gị na ebe nchekwa nchekwa nke nhọrọ gị, nke a bụ ihe ị nwere ike ime iji kpebie akwụkwọ akụkọ Open Access ka ị nyefere akwụkwọ edemede gị. Gaa na Thinkchecksubmit.org wee soro igbe igbe. Ọzọkwa, ị nwere ike iji Matcher Journal mepere emepe na Ndepụta Akwụkwọ Nleta Emepe emepe ikpebi n'akwụkwọ akụkọ dabara adaba maka ihe odide gị.
Categories:	ọkwaDdị Asụsụ
Tags: Sayensị DecoloniseLacuna EgoMasakhaneTụgharịa Sayensịtranslation
Asụsụ ndị Afrịka ka ha nweta okwu gbasara sayensị nke ukwuu - Mmụta igwe	18 August August 2021 na 8:17 pm
Ihe dị ka nde mmadụ 98 na -asụ asụsụ n'otu. Na mbido ọnwa a, AfricArXiv kpọrọ oku maka ntinye n'aka ndị edemede nwere mmasị ịtụle akwụkwọ ha maka ntụgharị asụsụ. Oge ngwụcha bụ 20 […]
Asụsụ ndị Afrịka ka ha nweta ọtụtụ okwu sayensị ka mma Kpesa Akụkọ Taa	18 August August 2021 na 10:08 pm
Ihe dị ka nde mmadụ 98 na -asụ asụsụ ọnụ. Na mbido ọnwa a, AfricArXiv kpọrọ oku ka ntinye akwụkwọ sitere n'aka ndị ode akwụkwọ na -ebufe akwụkwọ ha kpachaara anya maka ntụgharị. Oge ngwụcha bụ 20 […]
Ndị Afrịka na -awụsa mmiri na -agbakwụnye obtenir tinyere okwu ndị sayensị na -akọwa ihe --Ecologie, science - ecomag	18 August August 2021 na 11:11 pm
[…] Sont parlées mkpokọta gburugburu 98 nde mmadụ. Ọzọkwa tôt ce mois-ci, AfricanArXiv appel à soumissions d'auteurs intéressés à ce que leurs articles soient pris en compte pour la traduction. Ọ […]
Asụsụ ndị Afrịka ka ha nweta ọtụtụ okwu sayensị - Techbyn	19 August August 2021 na 12:13 am
Asụsụ ndị Afrịka ka ha nweta ọtụtụ okwu sayensị - asụsụ Nova	19 August August 2021 na 12:31 pm